Yintoni endimele ndiyazi malunga neprojekthi ye-backlink ukuze ndikhulise i-SEO yam?
Ngaphambi kokunye okunye, masiqale ngezinto ezisiseko. Kukho iintlobo ezintathu nje eziphambili zokuqhagamshela iprofile yakho ye-backlink kufuneka ibe nomdla xa ifika ekuphuculeni inkqubela yakho ye-SEO kwinkcazo. Ngako oko, okokuqala, kufuneka uqonde ukuba zeziphi iintlobo zekhonkco onokuzibandakanya kwiprofayile yakho yekhonkco ye-site - abanye babo basebenzela injongo ye-SEO, kodwa abanye bangayithwali loo mpembelelo enokulinganiswa kwi-traffic yakho kunye nokuchithwa okungcono kwi-intanethi yosesho, ubuncinci ngqo.
Yonke indawo ine-Backlink Profile eyakhiwe nge:
Izixhumanisi zangaphakathi - zixhuma amaphepha ahlukeneyo kunye namacandelo kwiwebhusayithi enye okanye iblogi. Ukusuka kolunye uhlangothi, iinqununu zangaphakathi zifunekayo kwiingcamango ezifanelekileyo zesakhiwo sokwakha izakhiwo eziza kwenza okuhle kungekuphela kokuphequlula komsebenzisi kodwa kungakhokelela ukukhawuleza ngokukhawuleza nokukhangela izinga lokukhangela i-bots. Ngakolunye uhlangothi, nangona kunjalo, umyalelo oqinileyo wesiseko ngokwawo mhlawumbi uyingxenye yecandelo elizimeleyo elinganika isalathisi esifanelekileyo sokumisela ukuba kubalulekile ukuba kuboniswe kubaphulaphuli ababanzi abaphandle. Qaphela: iinqununu zangaphakathi ezifumaneka kwiprofayili ye-backlink ayikho impembelelo enokulinganiswa kwi-traffic web, kunye ne-SEO kuwo wonke. Kuphela umgaqo womdlalo - kunye nemithetho elandelayo ingabuyiselwa, ubuncinane ngexesha, ngokufanelekileyo?
Iziqhagamshelwano zangaphandle - ezithathwe ngokubanzi, olu hlobo lunibanisi lusetyenziswa ngqo kwiinjongo ze-SEO. Ukuba phakathi kwezona zinto ezingabonakaliyo kwizinto eziphambili ze-injini ezifana ne-Google ngokwayo, kunye ne-Yahoo kunye ne-Bing, izixhumanisi zangaphandle zidibanisa abafundi bewebhusayithi yakho okanye iblogi nayo yonke indawo ye-intanethi kwiWebhu. Kwaye kufika isethi yamatriki amanqamlezo anqabileyo (njenge-PageRank, i-Domain Authority, i-User Trust, i-Authority Authority, njl.) U. Ngako oko, yonke iprofayile ye-backlink ifuna ukuba nawo onke amanqaku amaninzi angakwenzeka - anokudala ingqiqo ebonakalayo kwiinjini zokukhangela ukuba lewebhu okanye iblogi ifanelekile kubonise phezulu kwi-SERPs.
Kubaluleke ngakumbi kunokuba ungacinga. Ndiyathetha ukuba iinqununu eziphezulu kunye neempembelelo ezinamandla kwi-PageRank kunye neGunya lesiGqeba kuthetha ukuba awukho nje igunya elithembekileyo nelithembekileyo kwi-intanethi kodwa ukuba umxholo wakho wekhasi uyingqayizivele kwaye unikezela ixabiso elithile - ukuba abanye abantu I-Web ayikwazi ukukunceda kodwa ihambele kwaye iqondise inxalenye enokulinganisela yesithuthi sayo - ngqo kwiwebhusayithi okanye kumaphepha eblogi.
Yintoni eyenza i-backlink efanelekileyo kwi-SEO
1. Ubume boqobo - kuthetha ukuba zonke ikhonkco kwiiprofayili zakho zakhiwe ngokukhuselekileyo kwaye zenziwe ngokwasemzimbeni, ngaphandle kokuthatha inxaxheba kuyo nayiphi na indlela ehlawulwayo, ekhohlakeleyo okanye ecacileyo yokwakha isiqhagamshelo.
2. Ukufaneleka okufanelekileyo - kubonisa ukukwazi ukufanisa isihloko esiyinhloko okanye ingxoxo yenkcazo ukuzisa kuphela i-intanethi yebhanki ye-intanethi kumacandelo omabini alo mcimbi.
3. IGunya kunye nethemba-luphawu oluzichazayo, njengoko yonke i-backlink eyenza ukutshintshela inxalenye yale "ntambo ye-link" engacacile kufuneka ibe namandla,. e. , kufuneka ivela kwiindawo ezifanelekileyo ezifanelekileyo ezisebenzela kakuhle iimfuno zabasebenzisi abaphilayo Source .